သင့်ရဲ့မလိုလောဘကြောင့်လက်ရှိအမှန်တကယ်ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့အရာတွေကိုစွန့်ပစ်သလိုမဖြစ်ပါစေနဲ့ – Trend.com.mm
Posted on November 11, 2018 November 8, 2018 by Shun Lei Phyo
လူတွေရဲ့လောက ကသိပ်ကြောက်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ သိပ်ကိုလိုချင်တပ်မက်မှုတွေများလာတဲ့အခါမှာ ဘာကိုမှမစဉ်းစားတတ်ပဲ အမြင်ကန်းသွားတတ်ကြပါတယ်။ လောဘစိတ်ကအမှောင်ဖြစ်စေတယ်ဆိုတာ ဒါမျိုးကိုပြောတာပါ။ ဆိုတော့ ဒီလိုအမှောင်ထုဖုံးလွှမ်းသွားတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်တကယ်အစစ်အမှန်ပိုင်ဆိုင်နေရတာတွေကို မေ့နေပြီး ကိုယ်နဲ့မတန်တဲ့ အရာတွေ၊ ကိုယ့်အတွက်တကယ်မဟုတ်တဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေ၊ ကိုယ့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမပါပဲအလကားသက်သက်ရတဲ့အရာတွေကြား ပျော်မွေ့နေတတ်ပါတယ်။ သနားစရာကောင်းတာက ဒါတွေကခဏတာသက်သက်ပဲဆိုတာကိုသူတို့မေ့နေကြတတ်တာပါပဲ။ ကိုယ်နဲ့တကယ်မထိုက်တန်တဲ့အရာတွေ ၊ ကိုယ်တိုင်ကြိုးစားအားထုတ်မှုမရှိပဲ ရလာတဲ့အရာတွေဟာ ကို အဟုတ်ကြီးထင်နေရင်း ကိုယ့်နားကတန်ဖိုးကြီးအရာတွေက ပျက်စီးသွားစေနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်လူ့ဘ၀တစ်လျှောက်မှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်ချင်ရင် ကိုယ်နဲ့ထိုက်တန်လို့ရလာတဲ့အရာတိုင်းကို ပဲကျေကျေနပ်နပ်ကြီးလောဘတက်ပါ။ မလိုလောဘဆိုတာ အထူးသဖြင့် ညဏ်တိမ်တဲ့သူတွေနဲ့ လူပျင်းလူညံ့တွေမှာသာရှိတတ်ကြတာမလို့ မတော်ရင်နေပါစေ လူညံ့တော့မဖြစ်ပါစေနဲ့။ ဘ၀ဆိုတာသင်ထင်သလောက်မကြမ်းတမ်းပါဘူး။ သင့်နားမှာ သင်ရပ်တည်နိုင်ဖို့ရှိနေပေးခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ် ဘ၀ကိုလွယ်လွယ်နဲ့အရှုံးမပေးပဲ ကြိုးစားချင်စိတ်လေးရှိလာနိုင်ကြပါစေ….
လူတှရေဲ့လောက ကသိပျကွောကျဖို့ကောငျးပါတယျ။ သိပျကိုလိုခငျြတပျမကျမှုတှမြေားလာတဲ့အခါမှာ ဘာကိုမှမစဉျးစားတတျပဲ အမွငျကနျးသှားတတျကွပါတယျ။ လောဘစိတျကအမှောငျဖွဈစတေယျဆိုတာ ဒါမြိုးကိုပွောတာပါ။ ဆိုတော့ ဒီလိုအမှောငျထုဖုံးလှမျးသှားတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျတကယျအစဈအမှနျပိုငျဆိုငျနရေတာတှကေို မနေ့ပွေီး ကိုယျနဲ့မတနျတဲ့ အရာတှေ၊ ကိုယျ့အတှကျတကယျမဟုတျတဲ့ပိုငျဆိုငျမှုတှေ၊ ကိုယျ့ကွိုးစားအားထုတျမှုမပါပဲအလကားသကျသကျရတဲ့အရာတှကွေား ပြျောမှနေ့တေတျပါတယျ။ သနားစရာကောငျးတာက ဒါတှကေခဏတာသကျသကျပဲဆိုတာကိုသူတို့မနေ့ကွေတတျတာပါပဲ။ ကိုယျနဲ့တကယျမထိုကျတနျတဲ့အရာတှေ ၊ ကိုယျတိုငျကွိုးစားအားထုတျမှုမရှိပဲ ရလာတဲ့အရာတှဟော ကို အဟုတျကွီးထငျနရေငျး ကိုယျ့နားကတနျဖိုးကွီးအရာတှကေ ပကျြစီးသှားစနေိုငျပါတယျ။ ဒါကွောငျ့လူ့ဘဝတဈလြှောကျမှာအေးအေးခမျြးခမျြးနဲ့ပြျောပြျောရှငျရှငျနထေိုငျခငျြရငျ ကိုယျနဲ့ထိုကျတနျလို့ရလာတဲ့အရာတိုငျးကို ပဲကကြေနြေပျနပျကွီးလောဘတကျပါ။ မလိုလောဘဆိုတာ အထူးသဖွငျ့ ညဏျတိမျတဲ့သူတှနေဲ့ လူပငျြးလူညံ့တှမှောသာရှိတတျကွတာမလို့ မတျောရငျနပေါစေ လူညံ့တော့မဖွဈပါစနေဲ့။ ဘဝဆိုတာသငျထငျသလောကျမကွမျးတမျးပါဘူး။ သငျ့နားမှာ သငျရပျတညျနိုငျဖို့ရှိနပေေးခဲ့တဲ့သူတှအေတှကျပဲဖွဈဖွဈ ဘဝကိုလှယျလှယျနဲ့အရှုံးမပေးပဲ ကွိုးစားခငျြစိတျလေးရှိလာနိုငျကွပါစေ….
Relationship တိုင်းသိထားသင့်တဲ့ အမှန်တရားတွေက…